Ụbọchị Ahụike Uche Ụwa - Bromley, Lewisham & Mindwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Mbido > Mbọchị Ahụ Ike Uche Worldwa
Mbọchị Ahụ Ike Ọgụgụ Worldwa 2021
'Ahụike Uche na Ụwa Na -ahaghị Nhata'
Isiokwu nke Ụbọchị Ahụike Uche Worldwa nke afọ a na Ọktoba 10 bụ 'Ahụike Uche na World Unequal World'.
A họọrọ isiokwu ahụ site na ntuli aka zuru ụwa ọnụ nke Healthtù Ahụ Ike (wa (WHO), nke bụ ọrụ maka ibido ihe omume ahụ na 1992.
Ọ bụ ezie na mkpuchi nke ụbọchị a ga -adị n'uwa niile, dịka otu nzukọ Bromley, Lewisham & Greenwich Mind na -ekweta na ahaghị nhata na ịnweta, ahụmihe na nsonaazụ nkwado ahụike uche na mpaghara atọ anyị na -arụ ọrụ na ya. Anyị makwaara na n'ọtụtụ oge Covid 19, mkpọchi mkpọchi na ọta enyerela aka ime ka ịha nhatanha ndị ahụ mikwuo emie.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ahaghị nhata, gụnyere okike, afọ, ego, agụmakwụkwọ na nkwarụ. Agbụrụ na agbụrụ na -ekerekwa oke ọrụ. Iji mee ncheta ụbọchị ahụike uche nke ụwa, ndị ọrụ BLG Mind abụọ na -ekerịta echiche ha n'ihe na -ebute enweghị ahaghị na ohere ahụike na inye ahụike ahụike, yana otu ekwesịrị isi lebara ha anya. Smita Patel na Sheena Wedderman nọcha na Lewisham, obodo nke iri na ise kacha nwee agbụrụ dị iche iche na England, ebe mmadụ abụọ n'ime mmadụ ise ọ bụla bi na ha sitere na agbụrụ ojii na obere agbụrụ.
Smita bụ Onye Nkwado Ndị Ọgbọ maka ọrụ ọdịmma obodo Lewisham nke BLG Mind, nke gụnyere tinye aka na ME, mmemme na -enye ndị okenye sitere na Black, Asia, Minority Ethnic na Refugee obodo nkwado ahụike uche..
Sheena sonyeere BLG Mind n'oge na -adịbeghị anya dị ka onye njikwa oru ngo nke Ọdịbendị Ọdịbendị Ọdịbendị Ọhụrụ. Ebumnuche a bụ isonye na ndị sitere na obodo dị iche iche nke ọdịbendị na -enwetabeghị ọrụ ahụike uche.
"Ọ dị mkpa na anyị nwetara ego maka ndị ntụgharị okwu."
“Enwere nnukwu nsogbu na mgbochi asụsụ maka ọtụtụ agbụrụ pere mpe na Lewisham. Okwu asụsụ adịghị ebute ụzọ dịka ha kwesịrị ịdị na mpaghara London dị iche iche nke agbụrụ. Ọtụtụ ndị mmadụ enweghị enyi ma ọ bụ onye ezinaụlọ ha nwere ike iso ha gaa nhọpụta ma tụgharịa asụsụ.
Ndị mmadụ sitere na mpaghara pere mpe nwere nsogbu ahụike uche nke kpatara mmerụ ahụ dịka ịta ahụhụ, ịgbapụ site na mba ndị agha tisasịrị ma ọ bụ ọbụna ihe ndị mere eme dịka Nkebi India.
Ndị Alakụba, ndị Sikh, Punjabis, ndị Hindu - ha niile tara ahụhụ n'oge nkewa. E mere mkpebi buru ibu ma ị bi na India ma ọ bụ Pakistan e mepụtara ọhụrụ, mgbe ụfọdụ na-ekewa ezinụlọ ma na-akpata nnukwu nsogbu. Nke a enweela nnukwu mmetụta, na mgbe mmadụ nwara ịkọwa ya niile ọ na -esiri ike n'ihi mgbochi asụsụ na nsogbu ahụike uche nwere ike ibilite n'ime ezinụlọ na obodo. Echeghị m na ọrụ ahụike ọgụgụ isi ghọtara n'ezie nsogbu azụ nke gụnyere ruo taa.
Ọ dị anyị mkpa itinyekwu ọrụ n'ịkụziri ndị obodo na ọrụ gbasara nha anya na ịkwụwa aka ọtọ n'ihe gbasara nnweta ọrụ yana ikike ndị mmadụ nwere ike nweta ha. Ọ bụghị onye ọ bụla nwere ohere ịntanetị, ọtụtụ ndị agadi ma ọ bụ ndị bi n'ezinụlọ nwere ọtụtụ mmadụ na-efu efu.
Amalitere m itinye aka na ME maka ndị na -enweghị ike ịnweta ọrụ ndị ọzọ n'ihi ọdịiche ọdịbendị, ihere, mgbochi asụsụ. Anyị na ndị mmekọ na-arụkọ ọrụ gụnyere imeziwanye ohere ịnweta ọgwụgwọ gbasara mmụọ (IAPT), Healthwatch Lewisham na Lewisham Refugee & Migrant Network iji nyere obodo ndị a aka ịchọpụta nsogbu ahụike uche wee ghọta ha na ọnọdụ ọdịbendị.
Mana ọ dị mkpa na anyị nwetara ego maka ndị ntụgharị okwu ma ọ bụ anyị ga -atụ uche ọtụtụ mmadụ. ”
"Mmụta na mkparị bụ ihe abụọ dị iche."
“Echere m na ịkpa ókè bụ otu n'ime ihe kacha akpata enweghị ahaghị na ọrụ ahụike uche. A ka nwere ịkpa oke agbụrụ dị iche iche ma a bịa n'imeso ndị mmadụ sitere na obodo dị iche iche yana anyị kwesịrị inwe ike ịgbagha nke ahụ.
Ndị mmadụ aghọtachaghị ajọ mbunobi omenala. Anyị nwere ike ịkụziri ndị obodo mana ndị mmadụ na -echefu ihere, na mmụta na ihere bụ ihe abụọ dị iche.
Mgbe ndị mmadụ na -agwa anyị ahụmịhe ndụ ha nke ahụike uche, anyị na -anabata ihe ha na -ekwu. Mana ọ bụrụ na mmadụ ekwuo na ihe anaghị anọnyere ha ma enwere ike nwee ịkpa oke agbụrụ ma ọ bụ inwe mmekọahụ, a na -ajụ ya ajụjụ. Anyị kwesịrị ige ntị n'ihe ndị mmadụ ga -ekwu, ikwere na ha.
Okwu ndị ọzọ dị ka mbata na ọpụpụ mbubata pụtara na ọ bụ mmadụ ole na ole na -achọ ịrụ ọrụ dị ka ndị ntụgharị okwu. Ego na nkwarụ bụkwa nsogbu: ndị mmadụ nwere ike ha agaghị enwe ego iji gaa na ọrụ ahụike uche ma ọ bụ nwee ike enweghị ike ime ya mana enweghị ụzọ ọzọ ị ga -esi ruo ebe ahụ.
Ọdịbendị Ọdịbendị Ọdịbendị dịgasị iche nwere ike ime mgbanwe. Mana n'ihi na enwere nnukwu mkpa ọ nwere ike bechapụ naanị elu ya. Nke ahụ kwuru, ọ mara mma nke ukwuu na ọ nọ ebe a, echekwara m na inye ndị ezi mmadụ na akụrụngwa nwere ike ịchekwa ndụ. ”